Meyi, 2013 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ukuphinda ndisebenzise ngokusesikweni kwam busuku obusese eGuatemala, ngoku nje ukuba ndiza kuhamba apho ndishiye into yokuba uzonwaba.
Ndiyazi, ayizalisekanga ukukhwabanisa neteknoloji ... kodwa ikhona.
Wayeyintombazana entle enamehlo amnyama kunye neenwele eziqhelekileyo kumahlombe, kwezihlobo ezithandekayo zabasebenzi besikolo esikhoyo apho ndawenza loo minyaka, ababehlala kwiindawo ezineenkululeko ngokupheleleyo; Yena angaba ngasemkhumbini wokulondoloza imali, apho Elisa unondyebo, emva Nubia watshata Elvir kwaye yanyamalala kwimephu lali, kungenzeka kwigumbi lokutyela, emva kak Gladis wahamba, esidla njengoko lwangaphakathi, yiya enkundleni ngoMgqibelo busuku kwaye bahamba kunye neqela leiproti xa beya kwidolophana echazwe nguNjingalwazi uNancy.
Amaconco amnandi, ubuncinci, abakhange bembethe ibanga lesihlanu, iinxalenye zakhe zowesifazane zaqala njengama-oranges amancinci, kodwa amehlo akhe athatyathwa ngumbumba walabo baye bajikeleza ucingo.
Ndandisoloko ndimfumana xa ndaya kuhlamba izitya kwindawo yokudlela, mhlawumbi ngenjongo yokuba athathe ixesha elincinane ukuba adle, ukubala ixesha lokunyaniseka kwam kwintlekele ukungabikho kwiqela lamabanjwa eninzi. Kunokuba kokudlula kwi workshop, yena wawela iqonga elinde naye, ngaphandle wakhangela phezulu wayeyiva iyunifom eluhlaza namhlophe kunye ihempe engama yeza kuthi njengoko luvo bakhula ngokomlinganiselo uguqulo kuloo umgama, xa 3.215 mitha thina Sijonge amehlo ethu, kwaye xa sifika kwi-1.837, sasiyibuhlungu kunye nentloni, ngoko siza kuthetha into efanayo.
Emva koko saqhubeka sithuthela kwindlela echasene nayo, waya kwintolongo ka-anti, ndisiya kwisiqingatha seyure yamanzi ashushu kunye neXedex.
Ukususela 11 yokuhlangana, wagqiba ukubhala ileta encinane, isicatshulwa engabhalwanga ngainki ngothando, yaye le imihlathi emithathu enesiqingatha yasicela ukuba izithandwa, ndicinga ukuba bendingazi ukuba ukuba uthi ewe.
Babini kuphela kuthi ababesazi ngayo; UDaniel, endaba ngumhlobo olungileyo naye emva kokuba ndimkhaphile wayokutshayela isikolo kwisiqingatha sam semfundo sangaphambili, bendisazi nam, nangona njengoko watshoyo omnye, ngendikhetha ukuzibandeza uyolo lokwazi kuba lingcwele. Kwaye kungenxa yempembelelo kaDaniel, ukuba ngenye imini emva kokugoba ileta okwesihlandlo seshumi elinanye, ndaye ndagqiba ekubeni ndimnike. Kwakungobunye ubusuku, kukho imovie, umkhwa ongaqhelekanga wesikolo ekuhlalwa kuso, apho abafundi bathathwa basiwa kwigumbi lokutyela ngoMgqibelo, kwaye uSeño Margarita wakhupha iiteyiphu ezindala awayezisongela ngeprojektha, ngamanye amaxesha yayiziingxelo ezilula zembali eyaziwayo engasasebenziyo njenge "Umbono," imiboniso yaselunxwemeni yahlolisiswa ngomnwe wesalathiso kwilensi. Ngotshintsho, babonisa iLa Cruz y el Puñal kunye ne-El Progreso del Peregrino elinye ixesha lokugqibela. Nangona kunjalo abafundi bayonwabele, ngaphandle kuka-Oliva, owayekhe waqhankqalaza, kunye noPurificación, indawo leyo ayiphindwanga emva kokuphinda kwenziwe igumbi elimnyama elibizwa ngokuba yiManhatan.
Njalo intombazana yam intombazana ehlezi, yahlalaphi abapheki, abaphengululi bokugqibela kunye nabadlali abavela ngaphandle abaye bangena egumbini banezikhalazo ezigcinwe kwelinye ibali. Ebona into eya kusela amanzi ekhitshini, ngoko ke ndayisebenzisa, kwakumnyama, kungekudala ukukhanya kwefilimu, endiyikhumbulayo. Ndaya emva kwakhe, ndaya xa wazilumeka ukukhanya efrijini, ndabona ngomlomo wakhe obhityileyo ohlohliweyo iglasi eluhlaza, ekhangele kum ngamehlo luvo, waba nesibindi waza wamnika incwadi yakhe ndibile kancinane.
- Ndilinde impendulo yakho- Ndathi, kunye nobuqhawe obuye wamncoma, kodwa ngentliziyo yenza i-squirrel ebudeni.
Ndisakhumbuli ukuba uthe u-ewe, wayenokundixelela, andiyi khumbula. Ngalo lonke unyaka, silandela isimiso esifanayo, sidibana kwiplatifti efanayo, kunye neentliziyo ezifanayo, unetyala lokuba neleta egcinwe kwibhokisi yakhe eyimfihlo, mna ngethemba linye imini ndifumana enye ngokubuyisela.
Ufike ekupheleni konyaka, kwaye ulahle efanayo xesha, imvakalelo efanayo avelise kuthi ukuhamba ibhasi endala ngenkangeleko, intuthuzelo ukuba bequistas wayeza kuhlala kweeveki ezintathu, kwaye singathanda Bayayigqiba imihla yethu odangeleyo imijukujelwa ebusuku wasondela.
Ngenye imini ntambama, eyayivele ibonakale nje ngobusuku, sabonana, ndiyakwazi ukubona ubuso bakhe, obuhle, amehlo akhe ephilileyo, ukunyamezela kwakhe. I-Cabal Ndiyakwazi ukuphefumula kwakhe, emva kokumanga komncinane, kwakungekho ulwimi, asizange sisondele. Kwakungabonakali, kwakwanele ukukhumbula ukunambitha okumanzi kwaye ungalibali imeko.
Iminyaka engamashumi amabini kamva wabhala igama lam Uphando...
Xa eselula umquba wakhe kwi-coffee slush, imilomo yakhe ibonakala enye, njengabo busuku becinezela ingilazi eluhlaza ...
Post edlulileyo«Ngaphambilini MundoGEO # Qhagamshela ubhengeza abagqwesileyo bokugqibela kumabhaso e-2013
Post Next Iindaba ze-3 ezivela kwicandelo leeGeospatialOkulandelayo »